Imaaraatka Carabta oo dhalasho siineysa Xirfadlayaasha Ajnabiga ah - Ceeldheer News: Somalia News Update
Imaaraatka Carabta oo dhalasho siineysa Xirfadlayaasha Ajnabiga ah
Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa sameeyay isbaddal u ogolaanaya dalkan ku yaalla Khaliijka in uu dhalasho siiyo maalgashadeyaasha iyo xirfadlayaal kale oo ay ku jiraan saynisyahannada, dhaqaatiirta iyo qoysaskooda, dowladda ayaa warkan shaacisay maanta oo Sabti ah.
“Golaha wasiirada Imaaraatka, maxkamadaha maxalliga ah iyo goleyaasha fulinta ayaa magacaabi doona kuwa u qalma jinsiyadda, iyada oo la raacayo shuruudo qeexan oo loo dejiyay qayb kasta,” Amiirka Dubai ahna Madaxweyne ku xigeenka Imaaraatka Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ayaa sidaas ku sheegay qoraal uu soo dhigay twitter.
“Sharcigu waxa uu u oggol yahay dadka la siinayo baasaboorka Imaaraat-ka in ay sii haysan karaan dhalashadooda,” ayuu Sheikh Mohammed qoraalkiisa sii raaciyay.
Ma cadda in dadka la siiyo baasaboorrada cusub ay ka faa’iideysan doonaan nidaamka daryeelka bulshada ee ka jira dalkaasi. Imaaraatku waxa uu balaayiin doollar ku bixiyaa sanad walba waxbarasho bilaash ah, daryeel caafimaad, amaah guriyeynta lagu bixiyo iyo deeqo loogu talogalay qiyaastii 1.4 milyan oo muwaadiniinta dalkaasi ah.
Ajaaniibta ku nool Imaaraatka badanaa waxaa la siiyaa fiisooyin dib loo cusboonaysiin karo oo kaliya shaqeynaya dhowr sano kuwaasi oo lagu bixiyo shaqada. Dawladdu waxa ay dhowaan dabcisay siyaasaddeeda fiisaha, iyadoo bilowday in ay degenaansho waqti dheer ah siiso maalgashadayaasha qaarkood, ardayda iyo xirfadlayaasha.
Sanadkii la soo dhaafay, dowladdu waxa ay kordhisay nidaamkeeda fiisada “dahabiga ah” – kaas oo bixiya degenaansho 10 sano lagu joogi karo dalkan Khaliijka ah – lana siiyo xirfadlayaal gaar ah, kuwa haysta takhasus gaar ah iyo kuwo kale.
Dhaqaalaha Imaaraadka oo soo saarista saliidda iyo gaasku ay halbowle u yihiin ayaa waxaa saameeyay cudurka safmarka ah ee coronavirus iyo qiimaha saliidda oo hooseeya, taasi oo keentay tobanaan kun oo dadka dalkaasi ka shaqeysta ah isaga tagaan dalkaasi.
Madaxtooyada Somalia oo war ka soo saartay kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Beesha caalamka
Aabo Gabadhiisa oo 14-Sano jir ah si arxan darraa ugu dilay degmo ka tirsan Koonfur Galbeed
Beesha caalamka oo war ka duwan kii Madaxtooyada ka soo saartay kulankii Maanta
Madaxweyne Farmaajo oo shir deg deg ah iskugu yeeray madaxda dowlad gobaleedyad